Linux သည်သင်ကြည့်ရှုရန်မည်သည့် distro ကိုအသုံးပြုသည်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောကြောင့် Linux မှ
Linux မှ၎င်းကိုသင်ကြည့်ရှုရန်သင်အသုံးပြုနေသော distro ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်
အခင်းအကျင်းသစ်သည်အပြောင်းအလဲများစွာကိုဆောင်ခဲ့နိုင်ခဲ့သည်၊ ၎င်းတို့ထဲမှအဓိကအကြောင်းအရာကိုအစီအစဉ်တင်ထားသောသူငယ်ချင်း (aintmအသုံးပြုသူ၏ distro ကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သော PHP function ကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီကိုနဖူးစည်းစာတန်းမှတဆင့်အသုံးပြုသော distro ကိုမပြမီ၊ ယခုကျွန်ုပ်တို့ sidebar မှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်သည်။
Ubuntu သုံးစွဲသူများအတွက်ဤကဲ့သို့ပြလိမ့်မည် -
စသည်တို့နှင့်စသည်တို့ ... စသည်တို့ ... ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသောဖြန့်ဝြေခင်းစာရင်းဖြစ်သည်။
လည်းပဲ အန်းဒရွိုက် (တစ်ဝက်) နှင့် Windows ကို ဟားဟား။
ငါတို့မရပ်နိုင်သေးဘူး Lubuntu, Xubuntu, Chakra, Pardusငါတို့လိုချင်သောကြောင့်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၌ဤ distros များ၏အမှတ်တံဆိပ်၏ .SVG သို့မဟုတ် .PNG မရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၌ကျွန်ုပ်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ရှုံးသည်။ …တစ်ယောက်ယောက်ရှိပါကကျွန်ုပ်ထံပို့ပါ။ linux ထံမှ kzkggaara [@] [။ ] ပိုက်ကွန်
သင်မည်သည့်လိုဂိုကိုမဆိုရကြောင်းသတိပြုမိလျှင်ဟုတ်ကဲ့aTuxဒီမှာလို
ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် Linux ကိုသင်အသုံးပြုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုသော်လည်းဆိုလိုသည်မှာ distro ကိုကျွန်ုပ်တို့မသတ်မှတ်နိုင်ပါ။
နှင့် ... သင်အလုပ်သမားတစ် ဦး အလုပ်လုပ်နေသည်ကိုမြင်လျှင်:
ဆိုလိုတာကသင်သင် HAHA ကိုဘာတွေသုံးလဲဆိုတာမသိသေးဘူး။
ကျွန်ုပ်၏ distro ၏အမှတ်အသားကိုပြရန်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
LINUX ကိုပရိုဂရမ်ပြုလုပ်သောကြောင့်သင်၏ဘရောက်စာကသင်အသုံးပြုနေသောအရာနှင့်ပတ်သက်သောအရာများကိုပြောပြပါက DesdeLinux ကလိုဂိုကိုပြလိမ့်မည်။ ပြbrowserနာကသင်၏ဘရောင်ဇာကမပြောလျှင်…ကျွန်ုပ်တို့သည်ကံစမ်းမဲမဟုတ်သူများဖြစ်သည်။
၎င်းအတွက်သင်၏ဘရောက်ဇာတွင်အသေးစားပြင်ဆင်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပြီးသင်အသုံးပြုသောအကန့်အသတ်ဖြင့်ပြောရန်ပြောနိုင်သည်၊ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ခဲ့သည့်သင်ခန်းစာများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော link များဖြစ်သည်။
အကြံပြုချက်များ- User Agent ကို ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ။ Firefox ကို? (သို့မဟုတ် ရေခဲ)
အတွက် User Agent ကိုပြင်ဆင်ပါ တေးသံစုံကဇါတ် (သာမန်ထက်)
အကြံပြုချက်များ- User Agent ကို ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ။ ခရိုမီယမ်?
User Agent ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ SRWare သံ
ကျွန်ုပ်တို့သည် distro လိုဂို၏ပြသပုံကိုပြောင်းလဲမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုဝစ်ဂျက်၏နောက်ခံလိုဂိုသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်၎င်းကိုပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ထိုဟဟာဟာဟဟကိုမည်သို့ဒီဇိုင်းဆွဲရမည်ကိုမသိခဲ့ပါ။ အဆိုပါလိုဂိုထားပြီးသား။ ဘယ်တော့လဲ Elav သူပြန်လာပါ (သူဟာဒီနေ့အားလပ်ရက်ရောက်နေပါပြီ) သူသေချာတာပေါ့၊ သူကကျွန်မရဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့အဲဒါအကြောင်းကျွန်တော်ပိုသိတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီမှာသင်ကရှိသည် ... ပြissueနာဟာဟားခါး beta ကိုအဆင့်နေဆဲဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Linux မှ၎င်းကိုသင်ကြည့်ရှုရန်သင်အသုံးပြုနေသော distro ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်
179 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ကောင်းသော😀သူတို့ကြည့်ကောင်းတယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အထိမကောင်းဘူး၊ အခုအဆင်ပြေတယ်😀ငါဒီဇိုင်းအသစ်ကိုကြိုက်တယ်၊ ငါ့ကို Bootstrap သတိရစေတယ် - http://twitter.github.com/bootstrap/
ငါကိုယ်တိုင်ပြင်လိုက်ရင်သူတို့ bootstrap သုံးတယ်။ 🙂
ယေဘုယျအားဖြင့်အလွန်ကောင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်အထူးသဖြင့်ဤအသေးစိတ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သည်။ ရွှင်လန်း!
Gregorio Espadas ဟုသူကပြောသည်
Fedora 17 နဲ့ Chrome မှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြံဥာဏ်များရှိပါသလား။
ကောင်းပြီ၊ အဲဒါက Arch logo ကိုမပြဘူး၊ ငါနောက်တစ်ခါ user agent ကိုပြောင်းလိုက်ပြီ
သူကငါ့အဘို့အလုပ်ဖြစ်တယ်ရှိမရှိကြည့်ဖို့ယခု hehehe ငါ့ကိုပြသပါလျှင်ငါ့ကိုရန်
ငါ xDDD လည်းဒီမှာဖြစ်ခဲ့သည်
ကောင်းပြီ, ငါ Tux ရဲ့မျက်နှာကိုရနှင့်သင်တန်းငါရှိသည် အသုံးပြုသူကိုယ်စားလှယ် ကောင်းစွာစီစဉ်ထားသည် ...
ယခင်အခင်းအကျင်းနှင့်အတူငါ Arch လိုဂိုကိုရခဲ့ဘူး, ဒါကြောင့်သူတို့က, hahaha နောက်တဖန်တက်လွဲချော်သွားတာပုံရသည်။
Edited: Correction ... ညှိပြီးပြီ။ Arch logo ယခုပေါ်လာမလားပြောပြပါ။
Rogger Ortega (@ cronos426) ဟုသူကပြောသည်
ငါပင်ဂွင်း get ရ
Rogger Ortega (@ cronos426) ကိုစာပို့ပါ။
မင်းဘာ distro ကိုသုံးသလဲ
Firefox တွင် UserAgent ကိုပြင်ဆင်ပြီးပြီလား။
we Iceweasel ရှိ UserAgent ကိုပြုပြင်ဖန်တီးပါ၊aသင် tut သင်ခန်းစာထားခဲ့ left သောနေရာတွင်😉
တခါတလေမှာGüindousနဲ့အတူအလုပ်မှ ၀ င်ရောက်လိမ့်မည် ...
နာကျင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကဘာလဲ (အနည်းဆုံးတော့အခုလုပ်နေတယ်၊ ​​);)
Arch Linux နှင့် Chromium တို့နှင့်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်
ငါမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကမှတ်ချက်များထဲမှာသူတို့ OS ကို detect လုပ်တဲ့တူညီတဲ့ algorithm ကိုဘာကြောင့်မသုံးတာလဲ။
တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာတူညီတဲ့ယုတ္တိဗေဒကိုအသုံးပြုကြတာပါပဲ။ မှတ်ချက်များတွင်မှတ်စုများတွင်ပရိုဂရမ်များပိုမိုများပြားစွာပါဝင်သောပရိုဂရမ်များသာရှိသည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်ဟဟဟဟအနေဖြင့်ထိုအယ်လ်ဂိုရီသမ်ကိုပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်းကြောင့်အချိန်သာလိုအပ်သည်။
Alejandro Mora ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီ site ကိုငါကြိုက်တယ်။
Alejandro Mora အားပြန်ကြားပါ
ဟုတ်တယ် LOL ဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ပြbyနာကိုရှင်းထုတ်ပေးတယ်။ ဟားဟား။
တဖန်ငါ Tux ရဲ့မျက်နှာရ။ 🙁
ပြီးပြီ again ပြန်ပြင်ပါ😉
Noooooooo .. ငါ windbuntu မှာမဟုတ်ဘူး ... ငါ Chakra ကပါ။
ငါ Chakra ကိုမထောက်ခံသေးဘူး၊ ဆိုလိုသည်မှာငါလိုဂိုကိုလုပ်ပြီး၎င်းကို detect လုပ်ရန်ကုဒ်လိုင်းများထည့်ရမည်။ ယခုသီတင်းပတ်တွင်စတင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် Chakra ကိုထောက်ပံ့မည်မဟုတ်၊ ငါကြေငြာချက်တစ်ခုတင်မည်။ က😉
ငါ Archbang မှာရောက်နေပြီး Debian ကိုပြောတယ်
သင်သည် Archbang ကိုအသုံးပြုသည်ကိုညွှန်ပြရန် Chromium UserAgent ကို configure လုပ်ရန်လိုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှားမဟုတ်ချေ။ သင်၏ထင်မြင်ချက်များတွင်ပင် Debian လိုဂိုပေါ်လာသည်ကိုသတိပြုပါ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ^ - ^
ကျွန်တော့်ရဲ့ archlinux ကိုမတွေ့ဘူး၊ သံကိုသုံးဖို့လား။ : s
ဒီ post ကိုကြည့်ပါ၊ Iron မှာ UserAgent ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲရမလဲဆိုတဲ့ tutorial ကိုလင့်ခ်ထားခဲ့တယ်။ အဲဒီသင်ခန်းစာမှာ distro ရဲ့လိုဂိုကိုပြသနိုင်တဲ့သေးငယ်တဲ့ configuration ကိုသင်လုပ်နိုင်တယ်။
ပြီးပြည့်စုံသော, Debian ငါ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိထားပြီး
David De L၊ ဟုသူကပြောသည်
David De L ကိုပြန်ပြောပါ
ငါ Ubuntu 12.04 ကိုသုံးနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါက GNU / LInux ကိုပဲသုံးတယ်
desdelinux.net ၏ပင်မစာမျက်နှာတွင် Kubuntu ကို အသုံးပြု၍ Ubuntu သင်္ကေတကိုငါရပြီ
သို့သော်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်ပင်ကျွန်ုပ်သည်မှန်ကန်သော Kubuntu သင်္ကေတကိုတွေ့သည်။
ကျွန်ုပ်၏ "general.useragent.override" သည်
ယေဘူယျ.useragent.override; Mozilla / 5.0 (X11; Kubuntu; Linux x86_64; rv: 14.0) Gecko / 20100101 Firefox / 14.0.1
ငါထပ်တလဲလဲ: desdelinux.net ၏ပင်မစာမျက်နှာပေါ်တွင် Kubuntu ကိုအသုံးပြုခြင်း "သင်အသုံးပြုသော FromLinux ကိုအသုံးပြုရန်" ကို၎င်း၊ ၎င်း၏ညာဘက်တွင် Ubuntu သင်္ကေတကိုတွေ့သည်။
အိုအို ... ထူးဆန်းနေတယ်၊ ​​ငါအခုစစ်ဆေးနေတာပါ။
ဝင်သည့်အခါဤအခိုက်မှာ https://blog.desdelinux.net ငါ Kubuntu သင်္ကေတကိုရ။ အိုကေ!
ဟုတ်တယ်၊ အမှားကို Kubuntu fixed အမှားပြင်မိရင်ကောင်းမယ်
ငါထွက်လာတဲ့ Kubuntu သင်္ကေတဟာ ... ဟောင်းနွမ်းသွားပြီ။ Ubuntu နှင့် Kubuntu တို့သည်လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကျော်ကအထိမ်းအမှတ်များကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။
အိုး ... ကျွန်ုပ်အမှား😀
အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ ကျွန်ုပ်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပြင်လိုက်ပြီးသင်ပေးသောအရာကိုထည့်လိုက်သည်။ အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်😉
သင်၏ browser ကို .PNG အသစ်ဖွင့်ရန် [F5] ကိုသင်လုပ်ရမည်။
linux.net မှ ၀ င်သောအခါပေါ်လာသည့် Kubuntu သင်္ကေတသည်အသစ်ပြောင်းနေသည်။
အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ကျန်ရှိနေသေးသောအရာတစ်ခုမှာသေးငယ်သည့်အရာဖြစ်ပြီး၊ ဤမှတ်ချက်ကိုအထက်တွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည့်အတိုင်းဖြစ်သည် https://blog.desdelinux.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/kubuntu-1.png ဒါပေမယ့်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်တူသောပုံရသည် https://blog.desdelinux.net/wp-content/plugins/wp-useragent/img/16/os/kubuntu-2.png
ငါ Mageia ကိုလွန်ခဲ့သော ၂ ရက်ကစတင်ခဲ့သည်။ အလွန်မကောင်းသော linux ပင်ဂွင်းကိုသာငါမြင်သည်။ သို့သော်အိုးလေးကိုသာလိုချင်လျှင်
ပထမဆုံး ... site ကိုကြိုဆိုပါ။ ^ - ^
သင် Chrome တွင် UserAgent ကိုပြောင်းပြီး Linux ကိုသုံးသည်ဆိုပါစို့၊ အထူးသဖြင့် Mageia ကိုပြောသင့်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်ခန်းစာနှစ်ခုကို Chromium တွင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နှင့်ပတ်သက်သောလင့်ခ်အချို့ကိုချန်ထားပါမည်။ ၎င်းသည်အထူးသဖြင့် Chrome မဟုတ်သော်လည်းမူသည်အတူတူဖြစ်သည်😉
၂။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာသင့်အား Xubuntu SVG ကိုငါပေးမည်။
၃။ မှတ်ချက်တွင် Xubuntu ပေါ်လာလျှင်စစ်ဆေးပါ။
ကျွန်ုပ်အမှားကို hehe link များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဟုတ်ပါတယ်၊ Xubuntu လိုဂိုနှင့်အတူအီးမေးလ်ရောက်နေပြီ။ ဒီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲမကြာခင်စတင်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကနောက်ထပ်အသစ်ပြောင်းခြင်းအသစ်ပြုလုပ်မည်။
မှတ်ချက်မှာပါတဲ့လိုဂိုအကြောင်း, okis လည်း
သူတို့အားလုံးမှားနေတုန်းပဲ။ : S
Pavloco ပြောခဲ့သည့် link များအားလုံးမှားသည်။ ဒီဘလော့ဂ်ဟာသရဲခြောက်တယ်လို့ငါမသိဘူးလားဒါမှမဟုတ်ငါဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုမြင်တဲ့သူပဲ။ ဒါပေမယ့် Tux ရဲ့မျက်နှာကဟားဟား။ o_O
အိုး… ... ငါ့အမှားကမနေ့ကငါဒီအသေးစိတ်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့အသစ် site ကို update လုပ်တဲ့အခါဒီပြင်ဆင်ချက်ဟာ update ထဲမှာမတွေ့ရဘူး၊ ဒါကြောင့်အရင် state ကိုပြန်သွားခဲ့တယ်။
ဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သင့်သောအရာမရှိသေးပါ။ ယခုအချိန်တွင် Arch အတွက်ပြင်ဆင်ချက်ကို ToDo သို့ကျွန်ုပ်ထပ်ထည့်သည်။
ငရဲ, သူ့သင်္ချိုင်းမှလာမယ့် Tux စောင့်ရှောက်လော့။ ဤပင်ဂွင်းသည် Krillin ထက်အဆများစွာပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်သည်။
ယခုပေါ်လာသည်။ Xubuntu အတွက် mouse ကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ xD
ဟားဟား၊ ပေါ်လာရင်၊ ဒါပေမယ့်အရင်ဗားရှင်းတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ငါပို့လိုက်တာကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အေးအေးဆေးဆေးပဲ။ D.
ဒီဇိုင်းအသစ်သည်ပြန်လည်ကောင်းမွန်နေပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ငါမည်သည့်အကွာအဝေးကိုအသုံးပြုနေသည်ကိုပြောပြပါက၎င်းသည်မည်သူအသုံးပြုနေသည် (မသိသောဟာသ) ကြောင့်ဖြစ်သည်။ 🙂
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ Debian သည် (Firefox ကို အသုံးပြု၍ စမ်းသပ် အသုံးပြု၍ မနေ့ကအသုံးပြုသူကိုယ်စားလှယ်ကိုမထိဘဲ) မမှတ်မိပါ။
SolusOS သည် Debian ကိုအခြေခံထားသော ၀ င်းဒိုးမှလည်းကောင်း၊ Ubuntu မှလည်းကောင်း၊ Mac တွင်သော်လည်းကောင်းကျွန်ုပ်၏အသိအမှတ်ပြုခြင်းမှသော်လည်းကောင်း၊ ငါလုပ်သားကိုသဲပုံထဲကဂေါ်ပြားနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်။
အထောက်အထားကိုကြည့်ရအောင်။ Firefox 14.0.1 ဖြင့် OS X Mountain Lion မှမှတ်ချက်ပေးသည်
Debian ကိုသင်ထည့်သွင်းသောအခါ browser တွင်မည်သည့် UserAgent ကို configure မလုပ်နိုင်ပါ။ 🙁
SolusOS က၎င်းကိုမထောက်ပံ့သေးသော်လည်းကျွန်ုပ်သည် PNG သို့မဟုတ် SVG တွင်အမှတ်အသားပြုသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ် I ပေါ်လာမည်
Mac သည်၎င်းကိုမပံ့ပိုးနိုင်သော်လည်း Ubuntu နှင့် Windows do လုပ်နိုင်သည်
ငါ Mac ကိုမခံရပ်နိုင်ဘူး😛
မှတ်ချက်ရေးထားတာက၊ ငါ Mac ပေါ်မှာရှိနေပေမဲ့အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့နဖူးစည်းစာတမ်းအရနေထွက်ချိန်မှနေဝင်ချိန်အထိလုပ်ခမရတဲ့အလုပ်သမားကိုကျွန်တော်ရတယ်။
Stow Kewoto အငွေ့ ဟုသူကပြောသည်
စာရင်းထဲတွင်၎င်းသည် kubuntu ကိုထောက်ပံ့သည်ဟုဆိုသော်လည်း၊ ငါထင်သည်နှင့် ubuntu ကိုငါသုံးသည်။
Stow Kewoto Fume သို့ပြန်လည်စာပို့ပါ
ဟုတ်တယ်၊ ငါကဒီကုဒ်ကိုစစ်ဆေးရမယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကစမ်းသပ်ဆဲအဆင့်မှာငါ့အတွက်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ် အို_O.
သို့သော်လည်း Chrome ၏ UserAgent ကိုပြောင်းလဲရန်သင်ကြိုးစားခဲ့ပါသလား။
ကောင်းပြီ၊ သင်မှတ်ချက်များကိုပြင်ဆင်နေပြီလားကြည့်ကြပါစို့။ ကျွန်ုပ်တုန့်ပြန်မှုတစ်ခုမှမရနိုင်သောကြောင့်ပင်ပန်းသည်။ ¬¬
Lubuntu ၏အနုပညာလက်ရာများကိုသင်ရနိုင်သည့်လင့်ခ်ဖြစ်သည် http://lubuntublog.blogspot.com/p/artwork.html သူတို့လိုချင်တဲ့လိုဂိုကိုရှာနိုင်တယ်
ယခုဟုတ်ကဲ့၊ ငါ UserAgent ကိုလုပ်ပြီးယခုအလုပ်လုပ်သည်။
မည်သည့် UserAgent ကိုသင်ထည့်သွင်းနေပါသနည်း။
/ opt / google / chrome / google-chrome –user-agent = » Mozilla / 5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit / 535.1 (Gecko ကဲ့သို့ KHTML) Ubuntu Chrome / 19.0.1084.46 Safari / 535.1″% U
“ Exec = / opt / google / chrome / google-chrome” လိုင်းကိုရှာပြီးအောက်ပါအတိုင်းထားခဲ့ပါ။
Exec = / opt / google / chrome / google-chrome –user-agent =” Mozilla / 5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit / 535.1 (Gecko ကဲ့သို့ KHTML) Ubuntu Chrome / 19.0.1084.46 Safari / 535.1″% U
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် Xubuntu hehehehe ကိုထောက်ခံမှုထပ်တိုးသည်
Android နှင့် chrome ကိုစမ်းသပ်ခြင်း
အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ၊ သင်အဲဒါပြီးသားရှာဖွေတွေ့ရှိသင့်တယ်၊ ငါ့အမှားနည်းနည်း😉
ဟုတ်ကဲ့ယခု yupiiiiiiiiiiiii 🙂
UA ကိုလက်ဖြင့်တည်းဖြတ်ခြင်း Xubuntu ကအသိအမှတ်ပြုပါသလား။ Ubuntu ဘာကြောင့်ထွက်လာရတာလဲမသိဘူး .. 🙁
ဟုတ်ကဲ့၊ Xubuntuaရရှိမည်မှာသေချာသည်
Mozilla / 5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit / 535.2 (KHTML ကဲ့သို့ Gecko) ArchLinux Iron / 15.0.900.2 Safari / 535.2
၎င်းသည် Iron နှင့် ArchLinux အတွက် UA.ini လိုင်းဖြစ်သည်။
စကားမစပ်, Rekonq အိုင်ကွန်ကနေကူးယူနိုင်ပါတယ် http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rekonq-0.3.svg
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်မှာအိုင်ကွန်ရှိတယ်၊ မှတ်ချက်များထဲရှိအိုင်ကွန်များကိုပြသသည့်ပလပ်အင်ကိုအပြောင်းအလဲမလုပ်သေးဘူး။
ငါ့အသစ်တပ်ဆင်ထား Arch LInux မှ
စစ်ဆေးမှုများကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ avatar ယခုပြောင်းလဲမှုကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။
Rekonq + Kubuntu ကိုစမ်းသပ်ခြင်း ၁၂.၀၄
hehe, ငါပဲမှတ်ချက်များဖို့ Rekonq icon ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်
Firefox တွင် 'general.useragent.vendor' ကိုသင် သုံး၍ မရပါ။
Gentoo + google chrome ကငါ့ကိုမတွေ့ပါ
သင့်ကိုပြုပြင်မထားပါ အသုံးပြုသူကိုယ်စားလှယ်။ Entry ထဲရှိ link များကို Chromium တွင်မည်သို့ပြောင်းလဲရမည်ကိုစစ်ဆေးပါ (ဤနည်းလမ်းသည် Chrome နှင့်တူညီသည်) ။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။
ငါ Midori နဲ့ Fedora ကိုသုံးနေတယ်။
ပြီးတော့ဘယ် Distro က xD ကိုသုံးလဲဆိုတာပြောပြနိုင်လား။ ...
HAHAHA ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ browser သည်သင်အသုံးပြုသောအရာကိုဆိုင်းဘုတ်ကိုမဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်
သင်၏ UserAgent ကိုပြုပြင်ရမည်။
browser များနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်များသည် Icecat ကိုမှတ်မိပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ အကယ်၍ browser သည်၎င်းသည်အဘယ်အရာဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြပါက၎င်းကိုအသိအမှတ်ပြုသည်🙂
ငါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ငါ့ရဲ့ icon တွေကိုထိထိရောက်ရောက်ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပြီ။ အခု GMAIL နဲ့အခြားသူတွေကကျွန်တော့် browser ဟာဟောင်းနေပြီ၊ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို load မလုပ်ဘူးလို့ငါ့ကိုပြောလိုက်တယ်
၎င်းကို WebKit ကွင်းဆက်သို့ထည့်ပါ🙂
ဟိုဆေးမှ Miguel ဟုသူကပြောသည်
Probannnnndooooo …! (Xubuntu)
Jose Miguel သို့ပြန်သွားပါ
စမ်းသပ်ခြင်း (သံ + မာဟာရို)
Arch + Midori + Xfce ကိုစမ်းသပ်
lawliet @ debian ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အကောင်းဆုံးဖြန့်ဖြူးမှုကိုအသုံးပြုနေပါတယ်၊ အကယ်၍ သင်ကအခြားခေါင်းစဉ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖိုရမ်တစ်ခုခုကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မဆွေးနွေးလိုပါ။
lawliet @ debian သို့ပြန်ပြောပါ
မဟုတ်ပါ၊ အကောင်းဆုံးဖြန့်ဖြူးမှုကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုသောသူမှာကျွန်ုပ်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်မဆွေးနွေးလိုပါ။ သင်ဆွေးနွေးလိုပါကအခြားခေါင်းစဉ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဖိုရမ်သို့သွားပါ။
ကြည့်ရအောင်၊ ငါ Arch ကိုသုံးတယ်။
ငါအလုပ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တစ်ခုရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါက psp hehe ထဲမှာရှိနေလို့ပဲ
Julius Cesar ကိုစာပြန်ပါ
စမ်းသပ်မှု fix အသုံးပြုသူအေးဂျင့်
Debian Firefox ကိုမည်သို့ပြုပြင်ရမည်နည်း။
စမ်းသပ်ခြင်း, စမ်းသပ်ခြင်း, oh! အိုးတစ်၊ နှစ်၊ သုံး၊ အိုး, စမ်းသပ်ခြင်း, စမ်းသပ်ခြင်း
(Cacho စမ်းသပ်မှုကကောင်းသွားပြီ၊ တစ်ခုခုစားကြစို့!)
Chakra နှင့်အတူ Chakra ကနေရယူခြင်း။
Ubuntu ကအမြဲတမ်းပေါ်နေတတ်ပေမယ့် Xubuntu ကိုသုံးတယ်။ 🙂
Firefox နှင့် Xubuntu 12.04 သာတင်ခြင်း
အိုကေ! အခုတော့မှန်တယ်။ ထိုအခါမူကား၎င်းသည်ငါ့ကိုအမြဲတမ်း ubuntu လိုဂိုသို့ပြောင်းလဲစေသည်။
Arch + Kde စမ်းသပ်ခြင်း
အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်၊ တစ်ခုစီရဲ့ distros တွေကိုသိပြီးပြတင်းပေါက်အတော်များများကိုငါတွေ့ပြီ။
စမ်းသပ်ခြင်းသည် manjaro နှင့် firefox ထွက်သင့်သည်
.deb ဖြန့်ဝေမှုတွင် Pencil Sketcher ကိုတပ်ဆင်ခြင်း
ကျနော်တို့မိနစ်အနည်းငယ်အော့ဖ်လိုင်းရှိခဲ့သည် (Hostgator အော့ဖ်လိုင်း)